Nitodika Tany Amin’ny Olan’ny Fanampenam-Bava ny Parlemantan’i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2017 4:58 GMT
Nopotehin'i Kremlin. indray. ny fiafenan'anarana an-tserasera. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Nankatò andian-dalàna fanampenam-bava maromaro androany ny antenimieram-pirenenan'i Rosia, nandatsa-bato hanohana ny lalàna izay handrara ny servisim-pandefasan-kafatra hamela ny mpiserasera hifandray anaty fiafenan'anarana, hametraka ho tsy ara-dalàna ny fampiasana ny Tambajotra an-Takonana Virtoaly (VPNs), proxies, ary ireo fitety hafa ahazoana tsy miseho anarana, ary mitaky amin'ny milim-pitadiavana hanafina ireo tranonkala nosakanana.
Tao anatin'ny telo andro farany monja, tamin'ny herinandro farany mialoha ny handraisany vakansin'asara (andro mafana) no nandanian'ny “Duma”m-Panjakana volavolan-dalàna miisa 69. Ny lalàna androany, izay nolazaina fa dingana lehibe eo amin'ny fiarovam-pirenena rosiana, no fiezahana farany indrindra nataon'ny governemanta hanaraha-maso ireo katroka an-tserasera. Maro amin'ireo singa anatin'ny volavolan-dalàna no mifandraika amin'ny Teti-panoron'i Vladimir Putin Fampivoarana Fiarahamonin-Torohay iray ary mety ho mpialoha lalana amin'ireo fitsipika mamoritra kokoa.
Ny volavolan-dalàna mamaritra ireo sehatra fampitan-kafatra dia mitaky laharan-telefaonina amin'ireo servisy hanamarinana ny mari-panondroan'ny mpiserasera iray. Hanery ireo servisim-pampitan-kafatra malaza ao an-toerana tahaka ny Telegram, Viber ary Whatsapp handà ny fidiran'ireo mpisera tsy mbola nanome ny mombamomba azy ahafahana manamarina ny mari-panondroana azy ireo ny volavolan-dalàna.
Hotakian'ny lalàna amin'ireo orinasa ireo ihany koa ny hisorohan'izy ireo ny fampielezana votoaty voararan'ny lalàna amin'ny alalan'ny sehatra novelarin-dry zareo, raharaha iray izay azo heverina ho tsy azo tanterahina raha jerena ny hadirin'ny hafatra ampitain'ny mpiserasera amin'ireo sehatra ireo isan'andro. Ahitana fepetra manome alalana ny fitsarana hanome baiko ireo servisim-pampitan-kafatra hanakana ny hafatry ny mpiserasera ihany koa ao anatin'ny volavolan-dalàna.
Takian'ny lalàna amin'ny orinasa ihany koa ny hamela ny manampahefana ara-panjakana hampiasa ny tambajotran'izy ireo handefa hafatra faobe ho an'ireo mpisera manerana an'i Rosia iray manontolo.
Izay orinasa tsy manaraka ny fepetra napetraky ny lalàna dia mety ho tratran'ny fanakanan'ny Roskomnadzor, mpanao sivam-panjakana rosiana.
Nankatoavin'ny Duma ny volavolan-dalàna hafa izay mitaky amin'ireo mpanafina anarana sy toerana an'aterineto, ka tafiditra amin'izany ny VPNs, hanakana ny fidirana amin'ireo votoaty an-tserasera sasantsasany raha tsy izany dia hobahanan'ny Roskomnadzor. Ny Minisiteran'ny Raharaha Anatiny (MVD) sy ny Fiarovam-Pirenena Federaly (FSB) no hiantsoroka amin'ny fitsongoan-dia ireo servisim-panafenam-panondroana. Manome baiko ny milim-pitadiavana ihany koa ity lalàna ity hisoroka amin'ny fampisehoana ireo tranonkala voarara eo amin'ny valim-pitadiavana.
Samy efa voatsikera noho ny tsy fahampian'ny famaritana mazava tsara ny sehatra ilalaovany, izay manoka-baravarana any amin'ny fihoaram-pahefam-panjakana, ireo lalàna ireo.
Tsara ny milaza fa na ny lalànan'ny VPN na ny lalànan'ny fampitan-kafatra dia samy manjavozavo eo amin'ny fampiharana azy. Araka ny mahazatra dia manome efitra mankany amin'ny fandosirana sy ny fihoarana izany
Tamin'io andro io ihany ny Duma dia nandany volavolan-dalàna iray hafa mitaky amin'ireo mividy karatra SIM hampiseho pasipaoro manankery ahafahan'ny mpanome tolotra fifandraisandavitra manamarina ny mari-panondroan'ireo mpamandrika ao aminy.
Tsy maintsy mandalo amin'ny fankatoavan'ny antenimieran-doholona ao Rosia, ny Vaomieran'ny Federasiona, sy halefa any Kremlin hosoniavin'i Vladimir Putin ny volavolan-dalàna mialoha ny hivadihany ho lalàna.
Efa misy moa ireo servisim-pampitan-kafatra no vonona hanaraka ny lalàna, izay mety hanankery manomboka amin'ny 1 Janoary 2018. Ny lehiben'ny fampiasa fandefasan-kafatra Viber, iray amin'ireo orinasa nanaraka voalohany ny lalàna tamin'ny taona 2015 manery ny orinasan'aterineto hitahiry ny lahatahirin'ny olom-pirenena rosiana ao amin'ny tany rosiana, no efa nanambara fa hanaja tanteraka ny lalàna rosiana ny orinasany.
Vao haingana ny Telegram no nilefitra tamin'ny faneren'ny manampahefana rosiana, nanaiky ny hanoratra anarana ny orinasa saingy tsy hitahiry ny torohain'ny mpisera ao Rosia na handefa ny lahatahirin'ny mpisera iray manokana any amin'ny governemanta.
Heverina handany fepetra manidy lalana kokoa ny Duma rehefa mivory indray amin'ny volana Septambra: omaly, tao amin'ny fivoriambe nomerika NextM tao Moskoa, nanambara i Leonid Levin, filohan'ny komity ao amin'ny “Duma”m-Panjakana misahana ny politikan-torohay, teknolojian-torohay ary ny fifandraisana fa tsy hoela ny governemanta dia tsy hanan-tsafidy ankoatra ny fampandaniana lalàna momba ny big data, ny aterineton'ny zavatra, ny blockchain, ary ireo teknolojia maro hafa.